Raktarka aluminium daawaha ah ee raqiiska ah ee laga soo saaray qaybo warshad iyo alaab-qeybiyeyaal ah. Ouzhan
Qof kasta oo fahmaya astaamaha aluminiumku wuu ogyahay in kiimikada kiimikada ee aluminium ee ku jirta aaladda ay tahay mid aad u firfircoon, waxayna si dhaqso leh ugu falcelin kartaa oksijiinta hawada si ay u sameyso filim cufan oo ilaalin ah aluminium oksaydh.
Qalabka aluminium ee loo yaqaan 'aluminium alloy alloy extrusion'
Dhumucda filimku waa qiyaastii 1μm, oo la mid ah substrate-ka. Boondhiga ayaa ah mid aad u xoogan, taas oo ka dhigaysa dusha sare ee dahaadhku inuu dhaafo oo uu ka hortago is-oksijiinta inay sii socoto. Sidaa darteed, aluminium daawaha laftiisu kama baqayo oksijiinta, mana jiro wax oksijiin ah.
Daawaha aluminiumku wuxuu leeyahay aluminium oksaydh cufan leh oo dusha sare ah, sidaa darteed way ku adag tahay dahaadhka ka-hortagga daxalka inuu u hoggaansamo. Xitaa haddii la marsado, xayndaabka kahortagga dahaadhku ee dusha sare ee aluminium-ka aluminiumku way fududahay inuu hoos u dhaco marka lagu maydho biyaha ku jira gudaha hiitarka. Sidaa darteed, radiators alloy aluminium waa inaan loo isticmaalin nidaamyada kuleylka dhexe, laakiin waxay aad ugu habboon yihiin nidaamyada is-kululeynta.
Noocyada qalabka hiitarka ee aluminium: sababtoo ah kuleylka kuleylka wanaagsan ee aluminium aluminium, mabaadi'da ka hortagga-daxalka gudaha ee hiitarka
Daaweynta ka hortagga-daxalka gudaha ee hiitarka ayaa ah in lagu daboolo dusha sare ee hiitarka iyada oo leh lakab ah adhesion wanaagsan (adhesion) iyo caabbinta daxalka Midabka dabiiciga ah ayaa biyaha ka soo saara birta ama aluminium, taas oo markaa kaalin ku leh ilaalinta daxalka.
Faahfaahinta sheybaarka shey-kululeeyaha aluminium ee loo habeeyay
Daaweynta dusha sare Daaweynta kiimikada ee caadiga ah ee loogu talagalay aluminium aluminium ah waxaa ka mid ah chromization, rinjiyeynta, korantada, anodizing, iyo electrophoresis. Kuwaas waxaa ka mid ah, daaweynta farsamada waxaa ka mid ah sawir silig ah, nadiifinaya, ciideynta, iyo nadiifinta.
Nidaamka ugu muhiimsan StageBuuxinta marxaladda soosaarida; Marxaladda fiditaanka Marxaladda fiditaanka dhibta leh.
Xakamaynta tayada Xakamaynta tayada adag ee dhammaan nidaamka isku-duwidda mashiinka cabbiraadda min alaabada illaa baakadaha.
Isticmaalka Aerospace, dhismaha maraakiibta, dhismaha, hiitarka, gaadiidka, farsamaynta qalabka farsamada, qalabka caafimaadka iyo baahiyaha maalinlaha ah.
Sawirro qaas ah Wuxuu aqbalaa otomaatiga CAD, JPEG, PDF, STP, IGS iyo inta badan qaabab fayl ah.
Hore: 6016 aluminium daaweyn kuleyl daaweyn ah qaybo ka mid ah qalabka mashiinka CNC
Xiga: Qaybaha aluminium ee aluminiumka lagu duubay